Mandrahona Ny Hikatona Ireo Ozinina Ao Myanmar Raha Ambony Loatra Ny Karama Farany Ambany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Aogositra 2015 4:40 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, čeština , Nederlands, Español, English
Mpiasan'ny Ozinina Lacquerware ao Bagan, Myanmar. Sary tao amin'ny Wikimedia, lisansa CC.
Nilaza ireo orinasa mpanao akanjo ao Myanmar fa orinasa am-polony no voatery hikatona raha manaiky ny tolo-dalàna hametra ny karama farany ambany isan'andro ho 3.600 kyat (3,21 dolara Amerikana), sy ny karama farany ambany isan'ora ho 450 kyat (0,45 dolara) ny governemanta.
Ny Komity Nasionaly misahana ny Karama ao amin'ny firenena notendren'ny parlemanta no mpanohana ny tetikasa, izay manana 18 volana hanaovana fifampidinihana amin'ireo mpandray anjara isan-karazany manerana ny firenena. Noho ny toerana fadiranovana iainan'ireo mpiasan'ny ozinina no anton'ny tolo-kevitra ampiakarana ny karama.
Marimaritra iraisaina tamin'ny 4 000 kyat notakian'ny sendika sy 2500 kyat natolotry ny sehatry ny orinasa ity tolo-kevi-dalàna karama farany ambany vaovao ity.
Tamin'ny fiandohan'ity volana ity, nampitandrina ny Fikambanan'ny Orinasa Mpanao akanjo ao Myanmar fa maro ireo orinasa tsy mahaloa ity karama farany ambany 3,600-kyat ity, milaza izy ireo fa mety hisy fiantraikany amin'ny asan'ireo mpiasa 200 000 ny fanovana. Raha kely indrindra dia orinasa afakaba 90 tantanin'ny orinasa Shinoa sy Koreana Tatsimo no efa nilaza fa hikatona raha mandany ity fanovana karama ity i Myanmar.
Anisan'ireo mpiasa mandray karama farany ambany indrindra ao amin'ny faritra Azia-Pasifika ireo mpiasa mpanao akanjo ao Myanmar. Raha mihatra ny fampiakarana karama, mandray karama bebe kokoa mihoatra noho ireo namany ao Bangladesh ireo mpiasan'i Myanmar saingy mbola latsaka kosa raha oharina amin'ireo mpiasa ao Kambodza sy Vietnam.
Mandritra izany, nivoaka nanohana ny volavolan-dalàna fisondrata-karama farany ambany ny tambajotra sasany mpanao akanjo manerantany. Namoaka fanambarana mandrisika ny governemanta mba hanatsara ny fari-piainan'ny mpiasa ny Ethical Trading Initiative:
Mandrisika ny governemantan'i Myanmar izahay mba handray fepetra henjana hanatsarana ny fari-piainana - miankina aman'aina izany hiantohana ny ambaratongan-karama kely indrindra hanidy ny mpiasan'ny sehatr'asa iray ho ao anatin'ny fahantrana
Tsy niombon-kevitra tamin'ny fanambaran'ireo orinasa mpanao akanjo ao Myanmar, izay ahitana ireo orinasa tahaka ny Adidas, Gap Inc ary ny Tesco milaza fa hisy fiantraikany ratsy amin'ny faniriana hanaovana fampiasam-bola ao amin'ny firenena ny Firaisana Sendikaly :
Amin'ny fijerinay, mifototra amin'ny tsirin-kevitra diso ny filazan'ny fikambanam-barotra milaza fa hahakivy ny fampiasam-bola iraisampirenena ny fiakaran'ny karama farany ambany indrindra. Ny karama farany ambany natao tamin'ny alalan'ny fifampidinihana eo amin'ireo mpiantsehatra voakasika dia hisarika kokoa fa tsy hanakana ireo orinasa iraisampirenena mividy akanjo ao Myanmar, izay efa vonona handoa karama mahavelona amin'ny alalan'ny mpamongady azy ireo.
Tsy nilaza kosa ny orinasa mpamokatra akanjo H & M raha manaiky ny tolo-kevitra 3600-kyat, saingy nanoro hevitra ny governemanta izy mba hanaiky ny fampitoviana ny karama farany ambany indrindra nampiakarina mba ampiharina amin'ny sehatrasa rehetra misy:
Raha ambany noho ireo sehatrasa hafa ny tahan'ny karama amin'ny orinasa mpamokatra akanjo, dia tsy hahavita hisarika na hahatamana mpiasa za-draharaha, izay ilainy hampandroso sy hampivoatra ny toekarena ho filamatra.
Mampisy fitarainana an-jatony na avy amin'ny mpiasa na avy amin'ny mpampiasa ny volavolan-dalàna momba ny karama farany ambany indrindra
Misy ireo sendika sasany nanaiky ny tolo-kevitra fisondrota-karama, saingy misy ireo sendika hafa tahaka ny Tambajotran'ny Sendika Rehetra Miaraka ao Myanmar izay manohy amin'ny fitakiana karama farany ambany isan'andro ho 4000-kyat. Araka ny filazan'ireo mpikatroky ny sendika dia hampihena ireo tombontsoa hafa raisin'ny mpiasa ny orinasa hanonerana ny fiakaran'ny karama farany ambany indrindra, ka nahatonga ny sasany hiaro ny karama farany ambany indrindra isan'andro ho 4 000 kyat:
Raha manaiky ny karama farany ambany indrindra araka ny tolo-kevitry ny governemanta ireo tompon'ny orinasa dia mikasa hanapaka ireo fandaniana hafa tahaka ny fitaterana ny mpiasa izy ireo. Ka mba ahafahan'ny mpiasa miavo-tena dia tokony tazomina ho K4000 ny karama farany ambany indrindra.
Mampiseho ny fihetsiketsehan'ireo mpiasan'ny ozinina miisa 200 eo ho eo izay mitaky fisondrota-karama isan'andro farany ambany ny lahatsary eto ambany: